Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2017 November 02
02 Novambra 2017
Tantara tamin'ny 02 Novambra 2017
(27 Novambra, tamin'ny roa ora sasany, Ora ao Bruxelles): Araka ny filazan'ny BBC, maro ireo namoy ny ainy tany atsimon'i Iran: Horohorontany mahery vaika no namely ny faritra atsimon'i Iran, nanimba tanàna maro sy nahafaty olona dimy farafahakeliny ary nandratra am-polony maro, hoy ny manampahefana.
Blaogera Anaty Fangirifiriana, Tombontsoam-Pirenena & Fandisoam-Panantenana
Araka ny voalazan'ny ManNamanam, nahazo alalana hiatrika ny iray amin'ireo fanadinana farany nataony i Mojtaba Samininejad, bilaogera voafonja, niaraka tamin'ireo mpiambina ny fonja anankiroa, ary mifatotra rojo vy ny tanany. Mpianatra momba ny fifandraisana ara-tsosialy ao amin'ny Oniversite Azad (Teheran) izy.
Lasa tantara mafana ao amin'ny fampahalalam-baovao manerantany ny krizy nokleary Iraniana. Bilaogera Iraniana maromaro ao anatiny sy ivelan'i Iran no nizara ny fahatsapan'izy ireo sy ny tahotr'izy ireo momba ny sazy sy ny ady. Mampiseho ny fahadisoam-panantenan'izy ireo momba ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ihany koa izy ireo.
Mpanoratra Liam Anderson · Afrika Mainty
Manomboka mody any amin'ny taniny ireo mpitsoa--ponenana sasany, na eo aza ireo olan'ny tsy filaminana politika sy ara-toekarena izay mitohy. Sarotra kosa ny fiainana any amin'ireo toby.
Blaogy Afghan (2005): Fitsarana & Heloka an'Ady, Ady amin'ny Rongony sy Parlemanta
Mpanoratra Fred Petrossian · Eoropa Afovoany & Atsinanana
(Fanamarihana: lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 20 desambra 2005) Vao nanambara ny governemanta ao Afghanistan fa mikasa hiatrika hamaha ny olan'ny heloka an'ady sy ireo fanitsakitsahana hafa nitranga nandritra ny taompolo maro nisian'ny ady tao amin'ny firenena izy. Nosoratan'i Afghan Reality ny mahazavadehibe izany drafitra izany sy ny olana mety hibahana izany....
Fironana Sinema Shiliana
Mihabetsaka hatrany araka ny itomboan'ny taona ny Sarimihetsika Shiliana. Tontosaina ao an-tanànan'i Valdivia hatramin'ny taona 1993 ny “Festival de cine de Valdivia”, fetiben'ny sinema shiliana fantadaza indrindra. Afa-manolotra ny sanganasan'izy ireo amin'ity lanonana iraisampirenena isan-taona ity ny mpanatontosa sy ny tale shiliana. Afa-mamaky ny momba ity hetsika fanao isan-taona ity sy ny...
Manohy ny fisiany mavitrika tamin'ny taona 2005 ny bilaogy Iraniana ary lasa fiteny faharoa be mpampiasa indrindra ny fiteny Persiana (aorian'ny fifandraisan'ny teny Persiana Anglisy amin'ny teny Frantsay) ao amin'ny tontolom-bolongana. Ireto ireo hetsika sasantsasany tao amin'ny tanàna bilaogy Iraniana tamin'ny taona 2005 izay manan-danja amintsika:
Inona No Mitranga Ao Amin'ny Tontolon'ny Blaogy Ao Kenyà?
Mpanoratra Ory Okolloh · Afrika Mainty
Tsy zavatra tsara ve ny blaogy?